INGELOSI INOMBOLO 333 INTSINGISELO + YESIMBOLI - INANI
Ingelosi Inombolo 333 Intsingiselo yokomoya + uphawu
Ukuba ubusoloko ubona uthotho lwamanani aphindaphindwayo kuyo yonke indawo, awuzukuphambana, kwaye ayisiyonto yenzekileyo leyo! Thatha oku njengoMqondiso woqobo kwiingelosi zakho, izikhokelo zomoya kunye noMhlaba kwaye bazama ukufumana ingqalelo kwezi zikhokelo kunye nemiyalezo. La manani aphindaphindiweyo anokuvela njengexesha, kwipleyiti yelayisensi, uphawu lwendlela, inombolo yefowuni, itotali efanele ukufunyanwa, ubungakanani befayile kwikhompyuter yakho, inani lezaziso onazo kwi-Instagram, kwaye uluhlu luyaqhubeka ! Umhlaba wonke uya kuyithumela le miyalezo kuwe nangayiphi na indlela eyimfuneko! Thatha oku njenge uphawu ukwindlela elungileyo, imithandazo yakho iviwe, kwaye usiya kwicala elifanelekileyo. Inani ngalinye lineentsingiselo ezahlukeneyo, ngakumbi xa inani elinye liphindaphinda amaxesha ngamaxesha.
INTSINGISELO YOKUNGCONO 333
Ngaba ubulucela uncedo kwi-Universe mva nje? Mhlawumbi ubusebenza ngokungakhathali kwiprojekthi kwaye izinto khange zihambe ngokugudileyo. Ingelosi inombolo ye-333 iza kuwe njengomyalezo wokuba imithandazo yakho iviwe kwaye yaphendulwa, kwaye into emangalisa ngokwenene isendleleni eza kuwe eza kukuzisela uvuyo olukhulu nokuzaliseka. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba unako chillax kwaye uyeke. Kuya kufuneka uqhubeke nemizamo yakho yokusebenzela ukufikelela kwiinjongo zakho.
Ingelosi inamba 333 luphawu lokukhula okubonakalayo kwicala elilungileyo, ke ngoko zithembele kuwe ukuya phambili ukuba eli lelona xesha lilungileyo lokugxila ekucingeni ngokuqinisekileyo. Eli lixesha lokuthatha amanyathelo ngamathuba azibonakalisayo, kwaye usebenzise intuition yakho ukwenza izigqibo njengoko ukhokelwa nguThixo ukuya kwi-intuition yakho. Ungalindela ukuba ubuninzi bungene ebomini bakho ngenxa yale mizamo.
Eli nani alithethi kuthi wonke umsebenzi kwaye akukho kudlalwa! Ngapha koko, eli nani luphawu lokulinganisa, kwaye kulungile ukuhleka, yeka iinwele zakho, ube kumzuzu wangoku, kwaye wonwabe ngakumbi! Xa sizinika imvume yokonwaba, sibeka umntwana wethu ongaphakathi simahla kwaye siveze uthando, ukukhanya, kunye nokuveza izimvo zethu ngaphandle kwemida. Ukuba uziva uphefumlelwe ngakumbi mva nje, yabelana ngaloo ntetho nabanye nokuba yeyiphi na indlela yobugcisa, italente, okanye isipho somoya. Ukukwazi ukwabelana ngezipho kunye namabali akho nabanye kwenza ukuba abantu bazi ukuba abekho bodwa kuhambo lwabo.
Undoqo wobuthathu obungcwele bengqondo, umzimba, umoya ubakho kunye nama-333. Indalo iphela ikwazisa ukuba ukhuselekile, ukhuselekile kwaye ujongiwe ziiMasters eziNyukayo. Ngokwenkolo, u Yesu uyiNkosi enyukileyo eyaziwa kakhulu ukuba inxulunyaniswa nama-333. Amanye amandla afuzisela eli nani likathixo liphindwe kathathu aquka uMthombo kunye neeMasters eziNyukayo ezinje ngoBuddha, iSt. Germain, uMoses, kunye noQuan Yin. Umyalezo wabo kuwe kukuba unesibindi namandla okugcina, uqhubele phambili, kwaye uqhubeke nokusebenza ekukhuleni ngokomoya. Umyalezo ovela kwiiMasters ngale nombolo kukuzixolela kuba xa sixolelayo, siyakwazi ukukhulula amandla amileyo (ingqumbo, umsindo, iintlungu), ezithintela ukuhamba kwethu kweentsikelelo kunye namandla othando e-Universal Life Force. Inombolo ye-333 ikucela ukuba ususe zonke izinto, abantu, kunye neemeko (ezidlulileyo okanye ezikhoyo) ebomini bakho ezingasasebenziyo ezilungileyo zakho ezilungileyo. Ngokuxolela nokukhupha okungasasebenziyo kuthi, senza indawo yokuba INTSHA ingene!
Unamandla okwenza ifuthe elihle, elihlala lihleli kwihlabathi. Indalo iphela iyakuxhasa kuyo yonke le mizamo. Qiniseka ukuba ukhuselekile, kwaye ukhuselekile kuzo zonke iinzame zakho-ngakumbi xa kuziwa umsebenzi olula.
Eyona ilungileyo phantsi kokhilimu wamehlo wemibimbi
Inombolo yeengelosi ezingama-333
I-apophyllite crystal intsingiselo
Ukulunywa kwe-bug ngendandatho ebomvu ejikeleze yona
singayeka nini ukunxiba iimaski
ukumisa njani i-alopecia areata ekusasazeni
ngokubona inani elingu-444